अमेरिकी चुनाव : बाइडेनले जित्नुका पाँच कारण - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २३, २०७७ समय: १०:१५:०८
काठमाण्डाै – झण्डै ५० वर्षसम्म सार्वजनिक रुपमा काम गरेपछि दुई पटक उपराष्ट्रपति बनिसकेपछि जो बाइडेन अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति चुनिएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार बाइडेनले बहुमतका लागि आवश्यक दुई सय ७० इलेक्टोरल कलेज मतको आँकडा पार गरेका छन् ।
तर यस पटकको चुनावी अभियान कसैले अड्कलबाजी गर्न सक्ने अवस्थाको थिएन ।
यो चुनाव कोरोना महामारीको समयमा भएको हो, यो भाइरसले अमेरिकालाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गरेको छ । साथै देशभित्र सामाजिक उथलपुथल भइरहँदा चुनाव भएको हो ।
यो सबै माहोलका बीच बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्पको रुपमा एक यस्ता प्रतिद्वन्द्वीको सामु उभिएका थिए जो पहिलेका राष्ट्रपतिहरुभन्दा पूर्णरुपमा फरक छन् ।
तर राष्ट्रपति पदको तेस्रो पटकको आफ्नो दौडमा बाइडेनको टिमले राजनीतिक चुनौतीहरुलाई पार गर्दै अन्ततः बाइडेनलाई उनको लक्ष्यसम्म पुर्‍यायाे ।
सरसर्ती हेर्दा इलेक्टोरल कलेज मतको आधारमा बाइडेन र ट्रम्पबीच धेरै अन्तर नभए पनि देशको सबै मतको आँकडा हेर्दा बाइडेन ट्रम्पभन्दा लाखौँ मतले अघि छन् ।
तर डेलावेरका एक कार व्यापारीका छोरा देशमा सत्ताको शिखरसम्म कसरी पुगे ? यस्ता छन् पाँच कारण–
१. कोभिड, कोभिड र कोभिड
बाइडेनको जितको सबैभन्दा ठूलो कारण सायद उनी आफै पूर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहनु हो ।
कोरोना भाइरस महामारीले अमेरिकामा दुई लाख ३० हजार जनाको ज्यान गइसकेको छ, जसले त्यहाँका नागरिकको जिन्दगीसँगै राजनीतिलाई उल्ट्याइदिएको छ ।
चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन डोनाल्ड ट्रम्प आफैले यस कुरालाई स्वीकारेका थिए ।
गएको हप्ता विस्कन्सिनमा भएको एक र्यालीमा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘फेक न्युजसँगै अरु केही मए कोभिड, कोभिड र कोभिड मात्र छ ।’ पछिल्ला दिनमा विस्कन्सिनमा सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ ।
अमेरिकामा मिडियाको ध्यान लगातार कोभिडमाथि छ, महामारी मानिसहरुको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चिन्ता बनेको यसको सङ्केत थियो तर राष्ट्रपति चुनाव अभियानको मुद्दा यो थिएन । यस्तोमा राष्ट्रपतिले यस मामिलालाई सम्हाल्नेबित्तिकै उनको लोकप्रियतामा कमी आयो ।
गएको महिना पिउ रिसर्चले कोभिड सङ्कट सम्हाल्ने सम्बन्धमा मानिसहरुले मत लिएको थियो, जसमा बाइडेन ट्रम्पभन्दा १७ प्वाइन्टले अघि थिए ।
ट्रम्पको अभियानको केन्द्र विकास र समृद्धि थियो तर यथार्थमा कोभिडका कारण अर्थव्यवस्थाको लागि मुस्किल बढिरहेको थियो ।
यसका साथै विज्ञानमाथि प्रश्न खडा गर्नु, सानो वा ठूलो नीतिहरुको मामिलामा तुरुन्त निर्णय लिनु जस्ता कैयौँ कदमका कारण ट्रम्प नेतृत्वप्रति मानिसहरुको भरोसा कम भयो ।
गलअपका अनुसार यस वर्षको ग्रीष्म ऋतुमा ट्रम्पको अप्रुभल रेटिङ झण्डै ३८ प्रतिशतसम्म खस्किएको थियो र यसको एक ठूलो कारण कोभिड सङ्कटसँग जुध्ने विषयसँग जोडिएको थियो । ट्रम्पको चुनावी अभियानको यही कमीलाई बाइडेनले चुनाव अभियानमा हतियारको रुपमा प्रयोग गरे ।
२. कम तडकभडक चुनावी अभियान
आफ्नो राजनीतिक करियरमा बाइडेन आफैलाई कठिन अवस्थमा धकेल्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
एक पटकको उनको गल्तीका कारण सन् १९८७ को राष्ट्रपति पदको चुनाव हरेका थिए । त्यसपछि सन् २००७ सम्म उनले चुनावमा कुनै किसिमको सफलता हात पार्न सकेनन् ।
तेस्रो पटकको कोसिसमा पनि बाइडेनको बाटोमा बाधाहरुमा कमी आएको थिएन तर यस पटक यो कहिल्यै त्यति ठूलो मुद्दा बन्न पाएन ।
राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो बयानका कारण चर्चामा रहनु नै यसको पहिलो कारण थियो । दोस्रो कारण– गएको महिना केही यस्ता खबरले मिडियाहरुलाई व्यस्त बनाए, जस्तैः कोरोना महामारी, जर्ज फ्लोएडको मृत्युपछि प्रदर्शन र हिंसा र आर्थिक कठिनाइ । यी सबै खबरहरुले देशका नागरिकको ध्यान आफूतिर बनाइ राखे ।
यसको लागि बधाई बाइडेनको चुनावी अभियानलाई पनि दिइनुपर्छ किनकि उनले आफूलाई अभियानमा चाहिने भन्दा बढी मिडियामा देखाउन चाहेनन् । जसका कारण उनी गलत बयानका कारण चर्चामा रहनबाट बचे ।
यदि यो सामान्य चुनाव भएको भए र सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि धेरैजसो अमेरिकी नागरिक घरबाट बाहिर निनिस्कने फैसला नगरेको भए बाइडेनको टिमको यो रणनीति उनीमाथि भार पर्न सक्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
त्यस बेला ट्रम्पको ‘बाइडेन लुके’ जस्ता बयानलाई अलग तरिकाबाट हेर्न पनि सक्न्थ्यिो ।
बाइडेनको चुनावी अभियानले यी मुस्किल स्थितिसँग दुरी बनाइ रहँदा ट्रम्पको जिब्रोले उनलाई कैयौँ पटक धोका दियो र विवादमा राख्यो । यो बाइडेनको लागि फाइदाजनक साबित भयो ।
३. अरु जो–कोही तर ट्रम्प
चुनावको दिनभन्दा एक हप्ता अघिसम्म बाइडेनको अभियानले टेलिभिजनमा प्रसारित हुने आफ्नो अन्तिम विज्ञापन देखाउन सुरु गरे । गएको वर्ष उनको सुरुवात अभियानमा देखिएको सन्देश यस विज्ञापनमा पनि देखिएको थियो । अगस्टमा उनको मनोनयन स्वीकृति भाषणमा उनले यही सन्देशको बारेमा कुरा गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘यो चुनाव अमेरिकाको आत्मालाई बचाउने लडाइँ हो ।’ उनले यस चुनावलाई पछिल्लो चार वर्षमा देखिएको विभाजनकारी असर र बढ्दो अर्थव्यवस्थालाई ठिक गर्ने राष्ट्रिय मौका भएको बताएका थिए ।
बाइडेनले ट्रम्प ध्रुवीकरण चाहन्छन्, उनी भड्काउ कुरा गर्छन् र अमेरिकी नागरिकलाई शान्त र स्थिर नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने नारा नारालाई नै आफ्नो राजनीतिक दाउ बनाएका थिए ।
१८ वर्षीय थियरी एडम्स फ्लोरिडामा रहन्छन् । यस पटक मियामीमा उनी पहिलो पटक मतदान गर्दै थिए । उनले भनेका थिए, ‘ट्रम्पको व्यवहारबाट म थाकिसकेँ ।’
यस चुनावमा डेमाक्रेट नेता, ट्रम्पमाथि जनमतसङ्ग्रहको रुप दिन सफल भए न कि दुई उम्मेदवारबीचको चुनाव ।
बाइडेनको सन्देश स्पष्ट थियो, ‘ट्रम्प होइन ।’
यदि बाइडेनले जिते केही हप्तासम्म राजनीतिको बारेमा सोच्ने फुर्सद मिल्ने डेमाक्रेट समर्थकको आमधारणा थियो । यद्यपि पहिले यसलाई मजाकको रुपमा हेरिएको थियो तर यसमा कहीँ न कहीँ सच्चाइ लुकेको थियो ।
४. मध्यमार्गी बाटो चुन्ने रणनीति
जुन बेला जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारीको लागि मैदानमा थिए, उनको प्रतिस्पर्धा बर्नी स्यान्डर्स र एलिजाबेथ वरनसँग थियो । यी दुई जनाकै अभियानमा पैसा धेरै थियो, अभियानको आयोजना पूरै व्यवस्थित तरिकाबाट भइरहेको थियो र यसमा धेरै सङ्ख्यामा मानिस पनि उपस्थित भएका थिए ।
लिबरल पक्षको यस चुनौतीको बाबजुद बाइडेनले मध्यमार्गी बाटो चुन्ने निर्णय गरे । उनले सरकारद्वारा चलाइने स्वास्थ्य सेवा, कलेजमा निःशुल्क शिक्षा वा वेल्थ ट्याक्सको समर्थन गर्न अस्वीकार गरे ।
यसबाट उनको अभियानको अपिल मध्यम र असन्तुष्ट रिपब्लिकन्ससम्म पुग्न सफल भयो ।
बाइडेनले कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारको रुपमा चुने जबकि उनी वामपन्थी खेमाको समर्थन पाउनको लागि अरु कसैलाई पनि चुन्न सक्थे ।
पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बाइडेन, बर्नी स्यान्डर्स र वारेनको निकै नजिक थिए र यस मुद्दासँगै उनीहरुले युवाहरुलाई पनि आफूतर्फ आकर्षित गर्नको लागि यो निकै गम्भीर मुद्दा थियो । यद्यपि यसका साथै उनीहरुले स्विङ स्टेट्समा ऊजा (प्रदूषण गर्ने ऊर्जाको उत्पादन) मा निर्भर रहेका उद्योगसँग जोडिएका मतदाताको समर्थन न पाउने खतरा पनि उठाए ।
तर यो अपवाद साबित भयो ।
पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सनराइज मुभमेन्टकी सहसंस्थापक वार्शिनी प्रकाश भन्छिन्, ‘विगतमा हामी उपराष्ट्रपति बाइडेनको योजनाहरु र प्रतिबद्धताहरुको आलोचना गर्थ्यौँ तर उनले यी आलोचनाहरुको उत्तर दिए । उनले लगानी बढाए र कसरी कदम चाल्ने, पर्यावरणको सुरक्षा गर्ने र साथै धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा रोजगार उत्पन्न गर्ने विषयमा विस्तारसँग बताए ।’
यस वर्षको सुरुवातमा बाइडेनसँग चुनावी अभियान चलाउनको लागि धेरै पैसा थिएन, उनको खल्ती खाली थियो ।
तर उनले नोक्सान उठाएर चुनाव अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरे, त्यो पनि ट्रम्पको विरुद्ध जसले आफ्ना राष्ट्रपतिको कार्यकालको दौरान अभियानको लागि अरबौँ डलर जुटाएका थिए ।
अप्रिलपछि बाइडेनले आफ्नो चुनावी अभियानलाई रकम सङ्कलन गर्ने अभियानमा फेरे र सायद ट्रम्पको चुनाव अभियानको लापर्बाहीका कारण उनीभन्दा धेरै रकम जम्मा गरे ।
अक्टोबरको अन्तिमसम्म बाइडेनको चुनाव अभियानमा ट्रम्पको अभियानको तुलनामा १४ दशमलव ४ करोड डलर धेरै रकम थियो । उनले प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राज्यमा यति धेरै टेलिभिजन विज्ञापन दिए, जसको उनका प्रतिद्वन्द्वीले यसको प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् ।
तर पैसा मात्रै सबै कुरा होइन । चार वर्ष जब ट्रम्प कम रकममा आफ्नो अभियान चलाइरहेका थिए त्यस समय हिलारी क्लिन्टनसँग अभियानको लागि रकमको कुनै कमी थिएन ।
सन् २०२० मा जब कोरोना महामारीका कारण एक राज्यबाट अर्काे राज्यमा घुम्दै अभियान चलाउन सम्भव थिएन, तब धेरै अमेरिकी टेलिभिजन हेरिरहेका थिए । त्यस बेला बाइडेनको विज्ञापन काम आयो किनकि उनी घरमा बसेका मतदातासम्म आफ्नो सन्देश सजिलै पुर्याउन सफल भए ।
यसबाट उनले आफ्नो अभियान बढाउन सके र टेक्सस, जर्जिया, ओहायो र आयोवा जस्ता ठूला–ठूला राज्यमा धेरैभन्दा धेरै मानिससम्म पुग्न सफल भए ।
उनी रुढीवादी एरिजोना र निकै प्रतिस्पर्धात्मक जर्जियामा ट्रम्पलाई टक्कर दिन सफल रहे ।